Xildhibaanada koonfur Galbeed oo ka hor yimid in xiligaan Doorasho la qabto | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xildhibaanada koonfur Galbeed oo ka hor yimid in xiligaan Doorasho la qabto
Xildhibaanada koonfur Galbeed oo ka hor yimid in xiligaan Doorasho la qabto
Xildhibaano ka Tirsan Baarlamaanka Konfur Galbeed Soomaaliya oo Shir Jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa si Kulul uga Hadlay Dhibaatooyin ka Jira Deegaanada KGS, oo ay qeyb ka tahay Deegaano Alshabaab ay Go’doomiyeen oo dhibaata Culus ka jirto.
Waxayna sidoo kale ka hadleen Dhibaatada dhanka Amniga ah iyagoona sheegay in gaadiid Fara badan Alshabaab ay ku gubeen Sh/Hoose,waxayna Madaxda Dowladda Soomaaliya iyo Madaxweyne Laftagareen ay ugu Baaqeen in si Deg Deg ah ay uga jawaabaan Dhibaatada ka Jirta Konfur galbeed.
Sidoo kale waxay ka hadleen Arimaha Doorashada Dalka , waxayna Tilmaameen in aan Doorasho la Gali karin iyadoo Shacabka Konfur Galbeed ay dhibaato ku jiraan oo Deegaanada qaar la gedaayo Kiilo Sokor ah Lacag dhan $8 Dollar.
Previous articleShirkii Golaha Wasiirada ee Jubbaland oo maanta shir gudoomiyey Madaxweyne Ahmed Madoobe
Next articleGudoomiyahii Gobolka Geddo ee garabka Dowlada Federaalka oo xilka ka qaaday
. Maria Claudia Nechita waa gabadha maanta lagu wado inay la feertanto Ramla Cali oo Soomaaliya ku mataleysa tartanka feerka ee ciyaaraha Olimbikada Tokyo 2020. Ramla...
Haweenka Sacuudiga oo loo ogolaaday inay xajin karaan maxram la’aan...
wasaarada amniga Galmudug oo sheegtay in Ciidanka Daraawiishta Galmudug ay...
Mohamed Abdullahi Mohamed - July 6, 2021 0